အန်းဒရွိုက်အခမဲ့ Apps ကပ Calling | အခမဲ့ဖုန်းခေါ် App ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို
Tag ကို - အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို
ဤသည်နေ့ရက်ကာလအများအပြားမိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ကုမ္ပဏီများအများအပြားန့်အသတ်အသုံးပြုမှု packages များထွက်လှိမ့်နေကြသည်။ ဤသည်, သင်သည်န့်အသတ်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့န့်အသတ်ဒေတာကိုသုံးပါ, သို့မဟုတ်တောင်မှအချိန်ကာလတစ်ခုအခြို့သောပမာဏကိုအဘို့န့်အသတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမိနစ်ကိုသုံးနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်ထို packages များပင်အင်တာနက်ကိုကျော် download ပြုလုပ်အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါသောအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု applications များမှနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ကိုအဘယ်သူမျှမလမ်းနေတုန်းပဲရှိသေး၏။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အပလီကေးရှင်းအားသာချက်များစွာနှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ပေးဆိုတဲ့အချက်ကိုသည်။ ထိုအားသာချက်အချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နေကြသည်။
ဒါဟာသင်အခမဲ့ရနိုင်သည့်အရာကိုမဆိုအပေါ်သင့် hard ရရှိခဲ့သည်ပိုက်ဆံဖြုန်းချင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုမပါဘဲတတ်၏။ များစွာသောလူအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု applications များအသုံးပြုနေသည်အဘယ်ကြောင့်ထိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရေရှည်မှာကုမ္ပဏီများမှပေးသူတွေကိုမိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်သောစျေးနှုန်းတွက်ချက်သည့်အခါဤအပလီကေးရှင်းကိုသင်ပိုက်ဆံတစ်တန်သိမ်းဆည်းပါ။
အတော်များများကအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု applications များတဲ့အကြီးအ user interface ကိုရှိသည်။ ဒါကသူတို့အပလီကေးရှင်းသင့်ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများကိုရယူသုံးအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်နီးပါးအဖြစ်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ တခါတရံအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု application ကို အသုံးပြု. ထက်ပင်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ Feature ကို
အဘယ်သူမျှမကိစ္စကျနော်တို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်ဘယ်လောက်, service ချဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အချို့နည်းပညာဆိုင်ရာအမှားပျေါပေါကျအံ့သောငှါအခွင့်အလမ်းတွေကိုအမြဲရှိပါတယ်။ ဒါဟာသိသာတဲ့ကြှနျုပျတို့အားလုံးဒုက္ခဆင်းရဲတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေတက်အဆုံးသတ်ထားသည်။ အဲဒါကိုတောင်းဆို applications များလွတ်မြောက်မှကြွလာသောအခါသို့သော်တိုင်းဆင်းဖြစ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုနီးပါးမှုမရှိခြင်းကိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်။ ထိုအလွန်းသငျသညျသူတို့အဘို့အဘယ်အရာကိုမျှပေးချေရန်မလိုအပ်ပါပြီးနောက်တကား!
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်အောက်ကအကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု application ကိုရွေးချယ်ပြီးယခုဤအကြိုးကြေးဇူးမြားအပေါငျးတို့သ availing start!
SwiftCall - အခမဲ့ဖုန်း ...
Skype ကို Lite ကို - အခမဲ့ Video ...
Maaii: အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု & ...
Facebook မှာ Messenger ကို Lite ကို
Pinngle Messenger ကို -...
Zalo - ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု
Zangi Messenger ကို
TextMe Up ကိုအခမဲ့ခေါ်ဆို & ...
IMO beta ကိုအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုနှင့်စာသား
Softwego အားဖြင့် Recorder Call
WhatsCall - အခမဲ့ဂလိုဘယ် ...
JusTalk အခမဲ့ Video & ...
BiP Messenger ကို
YeeCall-အခမဲ့ Video ခေါ်ရန် ...
Zipt - အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် ...
နှစ်ဦးကလမ်း - Walkie talkies
Nextplus - Unlimited ...
LINE Lite ကို: အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု & ...
ကြေးနန်း Talk ကို
Wiper - ပုဂ္ဂလိကကျမ်းစာသို့ ...
BIGO - အခမဲ့ဖုန်း ...
Skype ကို Qik - Group မှဗီဒီယို ...
Round - အခမဲ့ Video ...
Voice ကို + (Google Voice ကိုပြန်ခေါ်)
အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု & စာသား ...